Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Ubuntu 13.10 Saucy Salamander | Site na Linux
Ubuntu 13.10 Saucy Salamander hụrụ ìhè awa ole na ole gara aga. Dị ka anyị na-eme na ntọhapụ ọ bụla nke ọgba aghara a, lee ụfọdụ ihe ị kwesịrị ime mgbe na-eme a ndozi site na mbido.
sudo apt-nweta wụnye gnome-session-flashback
sudo tinye-apt-repository ppa: ricotz / testing sudo tinye-apt-repository ppa: gnome3-team / gnome3 sudo tinye-apt-repository ppa: gnome3-team / gnome3-staging sudo apt-nweta melite sudo apt-get install gnome -shell gnome-tweak-tool gnome-sheel-ndọtị
Kpachara anya: itinye GNOME Shell n'ụzọ dị otu a nwere ike ịwụnye nchịkọta GNOME ndị ọzọ ụmụ okorobịa Ubuntu hapụrụ. Iji maa atụ, Nautilus. O doro anya, ma eleghị anya ọ bụ ihe ịchọrọ, yabụ na ikpe ahụ enweghị nsogbu ma ị ga-amarịrị ihe ga-eme.
gsettings set com.canonical.Unity.Lenses disabledless-scopes "['more_suggestions-amazon.scope', 'more_suggestions-u1ms.scope', 'more_suggestions-populartracks.scope', 'egwu-musicstore.scope', 'more_suggestions-ebay .scope ',' more_suggestions-ubuntushop.scope ',' more_suggestions-skimlinks.scope '] "
Gaa Ubuntu 13.10 ndu desktọọpụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Ubuntu 13.10 Saucy Salamander
Na-akpali. A hụrụ na thatdị n'otu nwere ike gbanwee na desktọọpụ ndị ọzọ na-enweghị ịnwụ na mgbalị ahụ.
Ka anyị hụ ma m ga - eme nkuzi banyere etu esi etinye igwe na amị na KDE nke ọma (dị ka Cinnamon).
Site n'ụzọ, enweghị m ike iji isiokwu Ubuntu na Debian Jessie na Gnome (ịnwe usoro ngwugwu ọkụ-gburugburu zutere). Ngwa gtk3 na-emechi onwe ya na akpaghị aka, ọ nwere onye maara ihe kpatara ya?
Enweghị echiche. Anaghị m eji Debian Wheezy enwebeghị ụdị nsogbu a. Ọ bụrụ n'ịchọrọ, ị ga-ahụ ya n'ime Nzukọ na saịtị ahụ raara nye Debian iji mesoo nsogbu gị nwayọ.
Ee ee, m ga-akwụsị ma emechaa, ọ ga-aka mma ịza ajụjụ ebe ahụ.
firefox-onye ọrụ-88 dijo
Googling "gtype.c ụdị id 0 abaghị uru" ma ị ga-ahụ azịza gị.
Zaghachi na Firefox-user-88
Daalụ maka ozi ahụ, m ga-eleba anya ịhụ ihe m hụrụ.
sudo apt-get -f wụnye ma ọ bụ sudo aptitude -f wụnye iji wụnye ndị na-adabere na gbajiri agbaji
Ogbodo 123 dijo
Tupu ime ihe niile ... ihe kachasị mkpa, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchekwa oge, bụ ịhọrọ ihe nkesa kachasị ngwa maka ọnọdụ anyị (ọ na-abịakarị ma isi ihe Ubuntu kachasị na US ma ọ bụ isi ihe nkesa na mba anyị, nke na-abụghị mgbe niile ngwa ngwa)
Iji mee nke a, anyị na-aga software isi mmalite -> na taabụ «Ubuntu Software» -> «Download si:» anyị na-ahọrọ «ọzọ ..» na mgbe ahụ na «Họrọ ihe nkesa kachasị mma»
Nke a ga - anwale sava niile wee họrọ nke kachasị ọsọ… ozugbo emechara ya, anyị nwere ike ime mmelite ahụ ma kwalite ha ga-abụ ỌZỌ KWES !R!! (karịsịa maka mba ndị Latin America n'ihi na sava ndị isi jupụta)
Ọ na-adọrọ mmasị ... Aga m etinye ya n'uche ...
Onye odee edemede ukwu!
N'agbanyeghị, ihe na-eme mgbe wụnye Kubuntu? «Fọrọ nke nta ka ihe ọ bụla 😛
Ekwuola otu ihe ahụ na MuyLinux, maka KDE 4.11. XD
Deactivate Akonadi na Nepomuk ma ọ bụrụ na ị naghị eji ha.
Mba, xD na KDE 4.11 ị chọpụtaghị na ha nọ ebe ahụ, ha anaghị ata akụ na ihe niile dịka nku.
Aghọtara m na mgbe m wụnye Arch + KDE.
Ma ọ dịkarịa ala maka m, mgbe m kwụsịrị naanị akonadi (Nepomuk ma ọ bụrụ na m jiri ya), oriri ahụ si na 470 dị ntakịrị karịa 200 MB.
Na mgbe bụ ihe na-eme mgbe wụnye Kubuntu?
Hahaha ị maara na "gnome-session-fallback" gbanwere aha ya na ụdị nke a kachasị ọhụrụ? ugbu a kporo "gnome-session-flashback" wtf? haha
Ọ bụ ntakịrị iberibe, ọ bụghị ya? Mana ọ bụghị naanị na Ubuntu ... GNOME gbanwere aha ahụ ...
Ntuziaka zuru oke ma zuru ezu iji wụnye Ubuntu. Ọ dị njọ na anaghị m eji Ubuntu ogologo oge. Ihe m, taa, bụ Debian Xfce ma ọ bụ Manjaro Xfce, ma ọ bụ OpenSUSE, ma ọ bụ Chakra. Ma a ga-enwe onye ga-adabara ya nke ọma. N'aka nke ọzọ ma ọ bụrụ na agụghị m akwụkwọ na-ezighi ezi n'ebe a Ubuntu ga-enwe nkwado maka ọnwa 9, nke dị m ntakịrị.
Ndị xorg edgers na ndị ọkwọ ụgbọala emeela agadi, ha bụ 13.8 mana m hiere ụzọ! , ppa anwụwo ọnwa abụọ! Ekwadoro m ịmepụta onwe gị ọkwọ ụgbọala na ịwụnye ya.
Ọ ga-adị mma ịnwe ike ịchọta ụzọ ọzọ '' viable '' ga-adị, ọkachasị maka ndị bidoro. Ọ bụrụ na inwere ya, nyefee m ya ... m ga-edezi post ahụ. 🙂
Ihe omume a na ebe nrụọrụ weebụ na-agbanwe usoro a:
Ma ọ bụ gbanwee nchịkọta Arch repos na .deb ọbịa nyekwa ha ha ka ubuntueros ghara ịta ahụhụ ọzọ.
Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Xubuntu:
Maka ndị na-eji Xubuntu ma chọọ desktọpụ ọdịnala:
-Tughari ogwe aka di ala na nhazi nhazi »Panel, ị nwekwara ike iru na nhọrọ ahụ site na ịpị aka nri na ya.
-Wụnye menu Whisker site na ịtinye ppa ndị na-esonụ:
... Mgbe ahụ melite na sudo apt-nweta-melite ma wụnye ya site na iji kọmputa ede sudo apt-nweta wụnye xfce4-whiskermenu-plugin
-Ha tinye ya na otu nhazi nke ogwe.
Echere m na nke ahụ ga-abụ 🙂
Maka ndị chọrọ "gbanye" ụfọdụ ihe eserese, ahapụrụ m edemede a nke m bugoro na peeji m:
Nke bụ eziokwu bụ na oge a ubuntu nwetụrụ nke ọma, ekwesịghị m itinye nke ukwuu, opekata mpe pc m hụrụ ngbanwe mmalite na mmechi na ịdị n'otu na-arụ ọrụ ntakịrị ntakịrị na ụdị nke a 13.10, mana ụdị ọ bụla na-eweta ọghọm ya nsogbu ya, ebe ọ bụ na ekwuputara ụfọdụ nchịkọta na-abaghị uru ma enwere ọgbaghara na ndị ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye ihe ejikọtara na ọbá akwụkwọ ia32-libs, mana ma ọ bụghị na ọ dị oke mma,
Ubuntu anaghị arụ ọrụ na pc m ... ọ na - eme kemgbe 13.04, gbadaa, nwalee 13.10 ma ị chọpụtara nsogbu ahụ ...
Enwere m ajụjụ m na-atụ anya na ị ga-enyere m aka ma gbaghara m:
Na laptọọpụ nke m na-etinye Kubuntu site na 11.04 ruo 13.04 mgbe ọ bụla na-enweghị nsogbu ọ bụla, ugbu a achọrọ m ịwụnye 13.10 mgbe ndụ malitere ma gosipụta nkwụsị ahụ, ihuenyo ahụ na-agba oji ma ọ dịghị eme ihe ọ bụla, mba enweghị gburugburu ebe obibi na enweghị diski a na-ahụ ọrụ; nke a emeworị m ebe ọ bụ na achọrọ m ịwụnye beta na beta RC, yana mgbe m chọrọ imelite site na 13.04, ọ budatara faịlụ ndị ahụ mana ọ maliteghị, agbalịrị m Fedora, Rosa, Pear ma wụnye ha n'enweghị nsogbu. ma na Kubuntu 13.10 enweghị m ike.
You maara azịza ọ bụla?
Agbasoro m ntuziaka ya na leta ahụ, na mgbe m banyere ... sistem m dara ụda, ọ banyeghị ... Otu ihe ahụ ọ mere onye ọzọ?
O mekwara m, mgbe m tinyechara Kubuntu 13.04 mgbe m melite na 13.10, ọ na-amalite mana ihuenyo ahụ na-agbazi oji, ebe m gbalịrị ịme ihe dị ọcha nke 13.10 ọ nweghịkwa ike; Ekwesịrị m ịwụnye Mageia 4 alpha 3 nke na-aga nke ọma na kernel 3.12
You nwere ike ịkọwapụta nke ọma ?? Kedu ihe ị mere?
ekwesighi ka ezumike na egwuregwu kwụsị?
Maka ndị anyị na-abụghị ọkachamara, nkuzi ndị a bara nnukwu uru. Daalụ.
Zaghachi Raul Sierra
Ihe ngwugwu ịdị n'otu-oghere-ịzụ ahịa ugbu a, a na-akpọ ya ịdị n'otu-ụlọ-obibi
otú iwu ị biputere ihichapu ihe adịghị arụ ọrụ, ụzọ isi mee ya na Ubuntu 13.10 Saucy Salamander bụ iwu a:
$ gsettings setịpụrụ com.canonical.Unity.Lens nwere nkwarụ-scopes "['more_suggestions-amazon.scope']"
Maka nke m, m na-ahọrọ ya dị ka nke a:
$ gsettings setịpụrụ com.canonical.Unity.Lenses nkwarụ-scopes «['' more_suggestions-amazon.scope ',' more_suggestions-u1ms.scope ',' more_suggestions-populartracks.scope ',' music-musicstore.scope ',' more_suggestions- ebay.scope ',' more_suggestions-ubuntushop.scope ',' kari_suggestions-skimlinks.scope '] »
Daalụ! M agbanweela ya. 🙂
Daalụ maka ndị dị otú ahụ a zuru ezu ndu 🙂
Ihe a ga-eme Ọfọn, usoro ma degharịa nke gara aga, n'ihi na ịdị mma m kpatara ya!
- Enweghị m ike iji aka wụnye ndị ọkwọ ụgbọala nvidia (mkpokọta dara).
- Nautilus kposara ma gosi m faịlụ zoro ezo mgbe niile.
- Totem anaghị etinye ihe mgbakwunye ọ bụla (tupu ee).
- Mgbe mepee combobox site na google chrome, mgbe ụfọdụ ọ na-egosi na saịtị ọzọ.
- Kazam na avconv anaghị arụ ọrụ.
A obere nyochaa -> http://www.youtube.com/watch?v=g-WbWXvmfWg
Ysmụ okorobịa, ihe dị ka otu ọnwa ma ọ bụ abụọ gara aga m gbanwere TV na n'ihi na anaghị m alụ ọgụ na hdmi m hapụrụ Debian mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ iji ya wee kpebie itinye Ubuntu Gnome 13.04.
M kwalitere na 13.10 n'otu ụbọchị ahụ, mana ọbụlagodi tupu a tọhapụ ya ma kwụsị ịbụ Beta.
Achọghị m ịgbatị onwe m oke, naanị ịsị na Ubuntu ewepụtara ma wụnye ya nwere ike bụrụ isi isi ọwụwa. N'aka nke m, ọ bụrụ na ndụmọdụ ahụ baara mmadụ uru, m ga-eji oge nkwado niile maka ụdị ọ bụla, nke megidere ihe ọtụtụ ndị chere na ọ bụghị ọnwa 6 kama ọnwa 9. Ahazila m ma wụnyekwa ọzọ na 13.04 ruo na Febụwarị Achọghị m ịma ihe ọ bụla gbasara Ubuntu Gnome 13.10 ugbu a, ọ dị ka ịnyịnya ibu na 13.10.
Nkechi 76 dijo
Zaghachi na Cj.aibar76
Ezigbo tuto, mana naanị ihe m na - enweghị ike inweta bụ etu esi eweda ihe nkesa X, kaadị m bụ ATI Raedon X1200 ọ na - esiri m ike ịrụ ọrụ site n’oge ruo n’oge. M ga-enwe ekele ma ọ bụrụ na ị nyere m aka na nke ahụ na ụdị nke m kwesịrị ime ya ...
Enweghi m ike ibudata ndị ndiswrapper ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala Linux maka ihe nkwụnye ọkụ wi-fi USB. Onwere onye maara ma ụdị a enwere nsogbu na nke a?
Ọ bara ezigbo uru, tụnye ntinye Codec.
Awụnyebeghị m ha na mbụ ma amaghịkwa otu esi edozi ya.
Ezigbo onyinye onyinye, oge obula ha bidoro ubuntu ps distro ohuru iji gbalita ya, enwere m olile anya na i gha n’iru inye aka dika otutu
Ezigbo nkwado maka ndị anyị bidoro… ..…KANụ
Mayorga Barrera dijo
Enwere m nsogbu, kaadị netwọkụ m jikọtara emezughị ma wụnye kaadị netwọk ENL832-TX-ICNT PCI ma enweghị m ndị ọkwọ ụgbọala, enwere m olileanya na mmadụ nwere ike inyere m aka, wụnye ubuntu 12.04. Daalụ
Zaghachi Mayorga Barrera
Andrea g. dijo
Ndewonu! Ndo na enwere m nsogbu nkwụnye ego isi, na Ubuntu 13.10 M na-ede paswọọdụ na ọ na-egosi nke ezighi ezi, mana ọ bụrụ na m tinye ya na ọdụ m ọ na-arụ ọrụ maka m, ọ bụrụ na m tinye paswọọdụ onye ọrụ, ọ na-arụ ọrụ maka m ! ma ọ bụghị na ndabara mgbanaka nkwụnye ego, Biko !!! Enyemaka!!!!
Zaghachi andrea g.
Ọ bụ na ha bụ igodo 2 dị iche iche! 🙂
Na echetaghi nke ahu i tinyere?
Ikekwe ị ga-anwa ihichapụ ya.
Ndewo, enwere m mbadamba Radeon HD 7850 nke ị na-akwado iji ndị ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ ndị nweere onwe ha?
Ekele maka post ahụ, zuru oke ma ọ dị ka ọ bụ kensinammuo, ozugbo m mechara nwụnye m ga-eso ya, daalụ nke ukwuu!
Zaghachi ka carcheky
Borja HA dijo
Ezigbo onye ndu, daalụ nke ukwuu onye ibe
Zaghachi Borja HA
Ndewo enyi, ezigbo nkuzi, dị nnọọ tinye na fglrx-legacy dakọtara ruo nsụgharị 12.10 dị ka onye edemede nke nchekwa.
Anọ m ebe a na-agba mbọ ịmụ s / linux. At na-ekwu na mbụ banyere "ọnụ" nke a amaghị m ebe m nwetara ya, zụta ya, chọta ya…. Ruo mgbe ahụ akwụsịrị m. Ma ọ bụghị n'ihi na m dị umengwụ ma ọ bụ onye nzuzu, amaghị m ya.
Ana m anabata ya. M dokwuo anya enweghị nkọwa zuru ezu banyere ya. Maka nke a na nghọtahie ndị ọzọ / ndị ọzọ; bụ ihe kpatara ọtụtụ ndị na-atụgharị (azụ) gaa GNU / LINUX.